Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-WTTC iphendula kwiingcebiso zamva nje ezivela kwi-EU
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Technology • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
wttc isitampu sokuhamba esikhuselekileyo
Abaphathiswa kunye nabenzi bezigqibo kwiziko loluntu batshintsha izithintelo zokuhamba yonke imihla. Ukunqongophala kwentsebenziswano kwihlabathi kunye nokusilela kwenkqubo yehlabathi kwenza umceli mngeni kwilizwe liphela, nakubakhweli abagonyiweyo.
Njengoko i-WTTC yayisenza ngaphambili, umbutho obonisa elona lungu likhulu kushishino lokhenketho kunye nokhenketho namhlanje wenze enye ingxelo kunye noludwe.
Ukuba le ngxelo iyakunceda ukuzisa naliphi na inyathelo lilindile ukuze libonwe.
U-Julia Simpson, uMongameli kunye ne-CEO ye-World Travel and Tourism Council (WTTC) ukhuphe ingxelo esithi: “Ukukhusela impilo yoluntu kufuneka ihlale ingumba ophambili kwaye i-WTTC ixhasa ngamandla iinkqubo zokhuselo ukunqanda ukusasazeka kwe-COVID-19.
Nangona kunjalo, ingcebiso ye-EU yokuphinda ubeke izithintelo kubahambi baseMelika linyathelo elibuyela umva kwaye liyakucothisa ukubuyiselwa kwecandelo.
“Ngamanqanaba aphezulu okugonya eMelika nase-EU, kufanele ukuba sijonge ekuvuleni uhambo phakathi kwala mazwe mabini ezoqoqosho.
Umphathi we-WTTC wongeze:
Sidinga iseti yemithetho efanayo eyamkela ugonyo lwehlabathi kwaye isuse isidingo sokuhlukaniswa kwabantu abaneziphumo ezibi ze-COVID.
“I-US yeyona ndawo iphambili yentengiso kumazwe amaninzi angamalungu e-EU, anje ngeFrance, i-Itali, iJamani, ne-Ireland, kwaye ezokhenketho zizakubaluleka ekubuyiseleni ubomi obuqhelekileyo kunye namashumi amawaka emisebenzi eMelika nase-EU.
"Endaweni yokunyanzelisa ezinye izithintelo zokuhamba, i-EU kufuneka ikhuthaze amazwe angamaLungu ukuba asebenzise isatifikethi seDijithali ye-COVID ukubuyisela ngokukhuselekileyo uhambo lwamanye amazwe, olusisiseko kuqoqosho lwaseYurophu."
The I-European Union iintsuku ezintathu ziye zarhoxiswa konke ukuhamba okufunekayo kubakhenkethi baseMelika ngenxa yesipikha kwizifo ezitsha ze-COVID-19 e-United States.
IPortugal, ilungu le-EU namhlanje lishiyile kwimigaqo ye-EU ibhengeza ukuba iyakubamkela abakhenkethi baseMelika.
NgoSeptemba 2, 2021 kwi-13: 32
igama elilahlekileyo "LIYACONJWA" elasuswa kwizimvo zam.
NgoSeptemba 2, 2021 kwi-13: 30
Nceda uchaneke kumanqaku akho… .ushiye igama elibalulekileyo kwesi sivakalisi-elibonwe kwizibiyeli:
"I-European Union iyayeka iintsuku ezintathu ukuhamba kuzo zonke iindwendwe zaseMelika ngenxa yesifo esitsha se-COVID-19 e-United States."
Uyenza into ngokunganikezi ingxelo ngokuchanekileyo.